अपराध – Himalaya Television
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राज्यविरुद्ध अपराध गरे – संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य (भिडियो रिपोर्टसहित)
१ जेठ २०७८ काठमाडौं । संविधानविद् डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर कारवाहीको माग गर्नुभएको छ । शपथ ग्रहणका क्रममा हिजो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानीजानी राज्य बिरूद्धको अपराध गरेकोले कारवाही...
संसद विघटन गरेर ओलीले राजनीतिक अपराध गरे, दण्डित गर्नुपर्छः नेता आचार्य
३ फागुन २०७७ विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री महेश आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर राजनीतिक अपराध गरेको बताउनु भएको छ । नेपाली कांग्रेस विराटनगरमा गरेको विरोधसभामा बोल्दै नेता आचार्यले ओलीले अलोकतान्त्रिक कदम चालेकाले उनलाई...
२४ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो वा सानो मात्रामा जोसुकैबाट हुने भ्रष्टाचार भए पनि त्यो अक्षम्य अपराध हुने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै एक सूचकका आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार...
कोभिड उपचारमा संविधानविपरीत शुल्क असुल्नु अपराध : कानून व्यवसायी (भिडियोसहित)
२१ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । सरकारले कोरोना उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एकएक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरुले बताएका छन् । सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अदालतले समेत शुल्क...
१७ भदौ, २०७७, विराटनगर । संगठित रुपमा आपराधिक कार्यमा संलग्न एक भारतीयसहित पाँच जनालाई प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेको छ । मोरङ प्रहरीले भारतीय नागरिक बिहार राज्य सितामणि जिल्ला घर भई विराटनगर बस्दै आएका २७ वर्षीय राजु साह, मोरङ कटहरी–२...
अपराध संरक्षण गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन डा. भट्टराईको माग
९ साउन, २०७७, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसद अधिवेशन बोलाएर अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने...
रुपन्देही सामूहिक हत्या भएकाको सनाखत, हत्याराद्वारा अपराध स्वीकार
२७ जेठ, २०७७ रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमामा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिले कसूर स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका सुर्खेतका ३१ वर्षीय झसेन्द्र सिंजालीले अपराध स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ । सिंजालीले फरुवाले हानेर हत्या...